Daabacaadda & Rinjiyeynta
Daabacaadda & Midabka
Denim Pulp Dyeing iyo Dhaqid
Khaas u ah Rinjiga suufka leh Mashiinka Joogtada ah
Wararka iyo Isbeddellada
Adeegsiga walxaha ka hortagga caabbinta ayaa door muhiim ah ka ciyaara shaqada iyo nolosha
Waxaa jira khataro badan oo ka yimaada korontada guurto ah. Hal khatar oo muhiim ah ayaa ka timaada isdhexgalka walxaha la soo oogay. Marka jirka diyaaraddu ku xoqdo walxaha sida hawada, qoyaanka, boodhka, iwm, diyaaradda waa la dallacayaa. Haddii aan la qaadin tallaabooyin, waxay si weyn u faragelin doontaa duulimaadka ...
Wax -ka -beddelka wax -ka -beddelka iyo habka loo adeegsado
Beddelayaashu waa isku -darka leh midnimo firfircoon oo firfircoon. Waxaa inta badan loo adeegsadaa dheehidda dahaarka dharka ee xargaha cellulose sida suufka, linenka, iyo rayonka, iyo sidoo kale dheehidda leh midabyo firfircoon oo toos ah isla qubayska. waxqabadka: Muuqaalka: dareeraha bunni Ionicity: cati ...
Qiyaasta waa 1%-10%, ku dar firidhka dharka si loo isticmaalo
1. Anti-acid, anti-alkali, iska caabin biyo adag, milmi biyo xoog leh; 2. Waxay leedahay dhex -dhexaadin wanaagsan, dheellitirnaan, qoyaan iyo kala firdhin; 3. Ka hortag saameynta ubaxa midabka leh, wasakhda, ubaxyada midabaynta, iwm; 4. Hagaajinta habsami u socodka, kala firdhinta iyo isku dhejinta xabagta, dhejiska, dahaarka ...
Waa maxay shidaalka dharka? Aqoonta dheeha dharka
Waa maxay shidaalka dharka? Aqoonta midabada dharka. Midabada dharka ayaa ah midabyo loo isticmaalo midabaynta dharka. Waxay u badan yihiin miraha dhirta sida miraha dhirta iyo dheecaanka geedka. Waxa kale oo ku jira soo -saarista kiimikada dabiiciga ah sida daamurka dhuxusha. Waxay u qaybsan yihiin midabyo dabiici ah iyo midabyo synthetic ah, badankoodu waa d ...
Hordhaca kala soocidda iyo sifooyinka jilciyayaasha
Softener waa nooc ka mid ah walaxda kiimikada oo beddeli karta isku -dheelitirka isku -dhafan ee firfircoon ee firfircoon. Waxaa lagu dhejin karaa dusha sare ee fiber -ka dharka leh oo ka dhiga fiber -ka mid siman, si loo beddelo dareenka gacanta loona sameeyo badeecadda mid raaxo leh. Si aan kuu siiyo hoosta ka wanaagsan ...
Waa maxay doorka wakiilka hagaajinta dharka?
Wakiilka hagaajinta wuxuu hagaajin karaa xawaaraha midabka dheeha ee ku yaal dharka sida wakiil kaaliye oo loo isticmaalo daaweynta qoyan. Waxay sameysan kartaa walxo midab leh oo aan milmin oo leh midabyo ku yaal marada si loo hagaajiyo dhaqidda iyo dhididka dheecaanka midabka, mararka qaarkoodna waxay kaloo hagaajin kartaa xawaaraha iftiinka. ...
Saddex qaybood oo ah walxaha liddi ku ah
1. Wakiilka Antistatic Habka wakiilka antistatic waa in lagu sameeyo filim biyo ah dusha alaabta iyada oo loo marayo xayeysiin si looga hortago sameynta iyo uruurinta korontada ma guurtada ah. Sidaa darteed, waxqabadka antistatic ee wakiilka antistatic wuxuu kuxiran yahay awoodda agta antistatic ...
Farqiga u dhexeeya filimka iyo saliidda silikoon iyo saliidda jilicsan
Farqiga u dhexeeya filimka iyo saliidda silikoon iyo saliidda jilicsan: 1. Saliid silikoon: Saamaynta jilcinta saliidda silikoonku way ka fiican tahay. Dhibaatada ugu weyn ayaa ah in ay tahay mid qaali ah oo qaali ah, waana sahlan tahay in la keeno saliid sabayn marka la isticmaalo. Iyada oo laga jawaabayo dhibaatadan, saliidda silikoon ee kopolymer ternary ayaa gashay ...
Ku kaxeeya si aad u fahanto oo u aqoonsato caraf udgoon
Illaa iyo hadda, dadku waxay falanqeeyeen qaybaha malodorous-ka ah, iyo xeryahooda ku jira baaruud, aldehydes, asiidh dufan hooseeya, iyo amine kala duwan ayaa dhammaantood lagu soo warramey inay yihiin qaybo ur leh. Malodoorro kaladuwan ayaa leh qaybo malodorous kala duwan, oo malodoorradaan, kuwa la yaqaan waxay u dhexeeyaan…
Qaado si aad u ogaato isticmaalka saliidda silikoon
Dimethicone wuxuu leeyahay astaamo aad u fiican oo kala duwan, sidaa darteed waxaa si weyn loogu isticmaalay qaybaha kala duwan ee waxsoosaarka warshadaha iyo beeraha, warshadaha difaaca, cilmi baarista sayniska, caafimaadka iyo caafimaadka iyo qeybaha kale. Waxaa si weyn loogu isticmaalaa dahaarka korantada, demoulding, defoaming, damping, shoc ...
Waa maxay mabda'a qoyaanka maryaha?
Mabaadi'da Dheecaanka Qoyaanka Dharka iyo Dhammaadka Dhididka Jirka bani'aadamku wuxuu si joogto ah u sii daayaa biyaha iyo kulaylka inta lagu jiro jimicsiga iyo shaqada. Neefsashada qoyaanka iyo dhammaystirka dhididka ayaa ah in kulaylka iyo uumiga biyaha ee dusha jidhka lagu wareejiyo dunida dibedda iyada oo loo marayo habka ...
Codsiga iyo habka loo adeegsado saliidda dunta
Caadi ahaan marka la marayo geedi-socodka, daweynta ka hor, iwm, arrimo badan ayaa laga yaabaa inay marada ka dhigto mid qallafsan, waxaana loo baahan yahay saliid si loo hagaajiyo dareenka. Saliiddu waa nooc ka mid ah saliidda oo dhar siin karta, maradaana waxay leedahay dareen jilicsan, xirnaan iyo adeegsi. Alaabooyinka kiimikada ee maalinlaha ah ee wanaagsan. Saliidaynta ...
Rm. 201, No. 3 Baishun St., Huangjingkeng, Huangjiang Town, Dongguan City, Gobolka Guangdong, PR China, 523760